Site na foto Google ugbu a, a ga -ahazi ebe ngosi gị | Androidsis
Site na foto Google ugbu a, a ga-ahazi gallery gị ọzọ
Google na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji melite ọrụ na ngwa ya niile yana, mgbe ịgbasawanye Soro ndị ezinụlọ kerịta ọrụ atọ ọzọ, Kalịnda, Debe na Foto, ugbu a ọ bụ ntụgharị nke Foto Google n'onwe ya karịa nke ahụ, ekele ihe oru Faịlụ ohuru a ga enyere anyi aka idobe usoro nke onyonyo anyi n’elu ihuenyo.
Welite aka gị nke na-enweghị ihe osise karịa otu oge yiri ibe ya, ma ọ bụ nju aka ole na ole ị na-achọghị ma ọ bụ na-enweghị ike ihichapụ, mana na ị gaghị achọ ịnọ ebe ahụ, ozugbo ị mepee Google Photos . Ọfọn, na ọhụrụ atụmatụ Nwere ike zoo oyiyi si isi Main Photos taabụ na-enweghị-ehichapụ si Google Photos.
Ihe ohuru "Archive" na Google Photos bu obere ihe ohuru na ịnụ ụtọ ya, ị gaghị emelite ngwa ahụ; dị nnọọ jide n'aka na ị nwere mbipute nke 2.15 nke ngwa arụnyere na ọdụ gị na voila! Ọ bụrụ na ị gaa n'akụkụ igodo ụzọ n'akụkụ ị kwesịrị ịhụ nhọrọ ọhụrụ na menu "Njikwa", dịka ọ na-egosi na ọnụ m:
Iji jiri ihe ọhụrụ ahụ, pịa foto site na ijide ya wee pịa akara ahụ na akara atọ dị n'akụkụ aka nri wee pịa "Archive". Nwere ike ime nke a ma site na otu foto anya na site na isi foto ihuenyo, ebe ị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ ihe oyiyi n'otu oge maka Archive.
Ihe ngosipụta nke njirimara a bụ na anaghị ehichapụ ihe oyiyi echekwaraKama nke ahụ, ha ga-adị njikere ịlele na ọba, nsonaazụ ọchụchọ, na nchịkọta faịlụ n'onwe ya. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike idobe isi ihuenyo foto gị nke ọma ka ịchekwa ihuenyo, foto na-enweghị isi ma ọ bụ ihe oyiyi ịchọrọ karịa na ọ nweghị onye ga-ahụ ma ọ bụrụ na gị na ndị ọzọ kerịta ọbá akwụkwọ foto gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Site na foto Google ugbu a, a ga-ahazi gallery gị ọzọ
Ihe kacha mma 5 PlayStation emulators maka gam akporo
Ihe mmetụta dị nso na-agbanyụ ngosipụta ihere na gam akporo O